Waaheen Media Group » Sakaatul fidriga oo waxa ay qayb wayn ka noqon kartaa ka soo kabashada dhibaatada abaaraha!
Browse:Home Articles Sakaatul fidriga oo waxa ay qayb wayn ka noqon kartaa ka soo kabashada dhibaatada abaaraha!	Sakaatul fidriga oo waxa ay qayb wayn ka noqon kartaa ka soo kabashada dhibaatada abaaraha!
Comments Off on Sakaatul fidriga oo waxa ay qayb wayn ka noqon kartaa ka soo kabashada dhibaatada abaaraha!	Xaaladda abaareed ee wakhtigan laga soo doogay, waxa ay ka tagtay saameyn dhaqaale oo baahsan, waxa hanti beelay boqolaal kun oo qoys oo ku tiirsanaa xoolaha nool iyo falashada beeraha, dadkaasi maanta way fara madhan yihiin, waxa ay u baahan yihiin gacan-qabad iyo dib u xoolayn, maaha dad quudin iyo gunnimo qaxootinnimo ku noolaan kara.
1- Sakada hantida iyo
2- Sakada nafta (sakaatul fidri)
1- Inaan si sax ah oo dhammeystiran sakada ganacsiga kala duwan loo maamulin.
2- In sidoo kale ay jiraan khaladaad sharci iyo kuwo xisaabeed oo la xidhiidha bixinta sakada, hadday tahay cidda la siinayo, qaabka loo siinayo iyo weliba qadarna la bixinayo intaba.
3- Waxa kale oo noo soo baxay in xajmiga maaliyadeed ee sako ahaan u waajibtaa ay aad u badan tahay, isla markaana haddii la qorsheeyo muddo kooban bulshada dhaqaalaheedu ku kobci karo, isla markaana dad badan xaaladda faqri lagaga rari karo, oo sako bixiyayaal loogu gudbin karo.
4- Waxa noo soo baxday in dadka sako bixiyayaalka ahi, ay boqolkiiba 60% ka gaadhayaan bulshada, halkan sako qaatayaashuna ka yihiin 40%, (sako bixiye waxa ugu hooseeya, qofka haysta 40-tan ka neef ee adhiga ah), waa sako bixiye, inkastoo qaatena uu noqon karo.
5- Qiimayn hordhac ah waxa soo baxday in muddo toban sannadood ka yar saka bixiyayaasha la gaadhsiin karo 90%, halka sako qaatayaashuna noqon karaan 10%.
1- Inuu yahay muslim, ha waynaado, ha yaraado, dhedig ama lab ha ahaado.
2- Haysto wax ka badan wuxuu quudan lahaa habeenka ciida iyo maalinteeda.
3- Soo gaadhay bisha ramadaan iyo shahaal, taasoo macnaheedu yahay in laga bixinayo xattaa ilmaha yar ee dhasha saacadda ugu danbeysa Ramadaan soona gaadha habeenka ciidda (Shawaal).
1- inay qofkan bixinaya ka dahirto wixii gef iyo afxumo ahaa ee soonka dhexdiisa ka dhacay, si soonkiisii ugu badbaado uguna dhameystirmo.
2- In maalintaas Ciida ee la faraxsan yahay masaakiinta laga farxiyo si ay muslimiinta faraxadda ula wadaagaan, loona baahitiro.
1- Xukuumadda Soomaaliland oo maanta hoggaankii ummadda ahi ma la iman kartaa qorshe noocan oo kale ah, isla markaana ma dammaano qaadi kartaa hufnaanta-fulineed ee hawshan?.
2- Waxa aan rajaynayaa in Wasaaradda Awqaafta iyo Diiwaanka Sakadu, ay qorshahan ka midho dhalin karaan, haddii ay aqoon ahaan iyo masuuliyad ahaan ba isu diyaariyaan xilkaas, sidoo kale la yimaaddaan qorshe ay ku abuurayaan kalsoonida bulshada, si sakaatul fidriga iyaga loo dhiibo?
Hargeysa, 17/06/2017, 22 Ramadaan, 1438 H. Email: tubtatoosan02@gmail.com